မြွေပွေးလို လူ မဖြစ်စေနဲ့..။ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / မြွေပွေးလို လူ မဖြစ်စေနဲ့..။
မြွေပွေးလို လူ မဖြစ်စေနဲ့..။
Apann Pyay 7:05 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောပါလိမ့်နော့ ပြောပြမယ်နော့ ။
ကျွန်​​တော်​တို့ ဖဒိုမြို့က ​ဈေးထဲမှာ ​မြွေသည်​​တွေအများကြီးရှိတယ်​.။ စပါး​ရိတ်​ချိန်​ဆိုရင်​ ​ခေါင်းဖြတ်​ထားတဲ့ ​မြွေ​တွေ အ​ခွေလိုက်​ထည့်​ထားတဲ့ လင်​ဗန်း​ကိုယ်စီ​ရွက်​ပြီး မြွေလိုက်​​ရောင်း​နေတဲ့ ​မိန်းက​လေး​​တွေကို ဆောင်းဦးနံနက်​ခင်းတိုင်း တွေ့ရတတ်​တယ်​..။ လင်း​မြွေ ​ရေ​မြွေ ​မြွေ​ပွေး အစုံပဲ..​ မြွေ​ပွေးဆိုရင်​​တော့ ​ဈေးကြီးတယ်​.။ တစ်​​ကောင်​ကို ၁သောင်း ၀န်းကျင်​​ပေးရတယ်​.. လင်း​မြွေတို့ ​ရေ​မြွေတို့က ပိသာချိန်​နဲ့ ​ရောင်းတာ..​ဈေးသိပ်​မရဘူး..။ ဒါ​ကြောင့်​ ​မြွေဖမ်းသမား​တွေက မြွေ​ပွေးလိုက်​ရှာပြီးဖမ်းတတ်​တယ်​..။ တစ်​ညကို ၂ ​ကောင်​​လောက်​ပဲရ.. ​နေ့တွက်​ ၂သောင်း စီသွားပြီ​လေ..
ကျွန်​​တော့်​အိမ်​နားမှာ ​မြွေလိုက်​ဖမ်းတဲ့ ​မြွေမုဆိုး ကရင်ဖထီးကြီး ​တစ်​​ယောက်​ရှိ​တယ်​..။ တစ်​​နေကုန်​ အရက်​​လေး​သောက်​လိုက်​ အိပ်​လိုက်​နဲ့ ညကျမှ ၂ ခွမှိန်း​လေးကိုင်​ ၊ ၀ါးပလိုင်း​လေးလွယ်​ ၊ ဓားမ​တိုလေးတစ်​​ချောင်း ခါးကြားထိုးပြီး ကွမ်း​လေးတစ်​ဖွီဖွီနဲ့မြွေလိုက်​ဖမ်း​တော့တာပဲ..။ သူ့​ခြေ​ထောက်​တစ်​ဖက်​က နဲနဲဆာတာတာနဲ့ဆို​တော့ လမ်း​လျောက်​ရင်​ သိပ်​မ​လျောက်​နိုင်​ဘူး.. ဒါ​ပေမဲ့ ည ၃ နာရီ​လောက်​ဆိုရင်​ အိမ်​​ရှေ့က​နေ ​တောစီးဖိနပ်​သံတစ်​ဂွက်​ဂွက်​နဲ့ သူအိမ်​ပြန်​တဲ့အသံကိုကြားရတယ်​..။ ကရင်​သီချင်း​လေးခပ်​တိုးတိုး ဆိုလာပြီဆို ကျိန်းသေတယ်​.. ​မြွေ​ပွေး ၂ ​ကောင်​​လောက်​မိလာပြီ.. ​ခြေ​ထောက်​ဆာတာတာနဲ့ ဒီအတီးက အင်​မတန်​လျှင်​မြန်​တဲ့ ​မြွေဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကို ဘယ်​လိုဖမ်းလဲဆိုတာကျွန်​​တော်​စိတ်​၀င်​စားတယ်​..။
ဒါ​ကြောင့်​ တစ်​​နေ့​တော့ ကျွန်​​တော်​အဲ့ဒီအတီးအိမ်​ကို သွားလည်​ရင်း သူ့ကို အင်​တာဗျူးရတာ​ပေါ့.. "အတီး..အတီးက ​ခြေ​ထောက်​လည်း မသန်​ဘဲနဲ့ ဒီ​လောက်​မြန်​တဲ့ ​မြွေ​တွေကို ဘယ်​လိုဖမ်းလဲဗျ.." "ငါက ​ခြေ​ထောက်​မသန်​​တော့ လင်း​မြွေတို့ ​ရေ​မြွေ​တို့ကို မဖမ်းနိုင်​ဘူး..။ ဒီ​ကောင်​​တွေက လူ​တွေ့ရင်​ ထွက်​​ပြေးတယ်​ကွ. ဒါ​ကြောင့်​ငါ​မြွေ​ပွေးပဲဖမ်းတယ်​.." "အတီးက ​မြွေ​ပွေးကို​ရော ဘယ်​လိုဖမ်းလဲ.." "​မြွေ​ပွေးက လူ​တွေ့ရင်​ ထွက်​မ​ပြေးဘူးကွ.. လူုကိုရန်​မူမယ်​ဆိုပြီး အသင့်​အ​နေအထားနဲ့ ငြိမ်​​နေတာ..။ သူ့မှာ အဆိပ်​ပြင်းတယ်​ပေါ့ကွာ..။ ဘယ်​သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်​ဘူး​​ပေါ့.. လာမထိနဲ့ ​သေသွားမယ်​​ပေါ့ကွာ..။ သူ့ကိုထိတာနဲ့ ဆတ်​ခနဲ လှမ်းကိုက်​​တော့တာပဲ​ဟေ့.. ​သူ့ကိုမထိ​သေးရင်​ မင်းကိုဘာမှမလုပ်​ဘူး..
အဲ့ဒီ​တော့ သူ့​ခေါင်းနားကို မှိန်းနဲ့အသာ​လေးကပ်​သွားပြီး ထိလုထိခင်​ကျမှ မှိန်း ၂ ခွနဲ့ ​ခေါင်းကိုအမြန်​ထိုးချလိုက်​ရင်​ ဒီ​ကောင့်​ကို မိတာပဲ..ဟဲဟဲ....။ ​မြွေထဲမှာ အဆိပ်​ပြင်းပါတယ်​ဆိုတဲ့ ​မြွေ​ပွေးက ဖမ်းလို့အလွယ်​ဆုံးဟ..။ ဒီ​ကောင်​က အဆ်ိပ်​ပြင်းတယ်​ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်​သူ မာန်​တတ်​​နေတာကိုး..." "​အော်​......" ကျွန်​​တော့်​ရင်​ထဲ အ​တွေး​တွေ တသီကြီးနဲ့ အတီးအိမ်​က ပြန်​လာခဲ့တယ်​..။ အဆိပ်​မရှိ​​တဲ့ ​ရေ​မြွေတို့ လင်း​မြွေတို့ကမှ လွတ်​​မြောက်​နို​င်​တဲ့လမ်း ရှိ​သေးတာပါလား.. ငါအဆိပ်​ပြင်းတာပဲဆိုပြီး မာန်​တတ်​​နေတဲ့ ​မြွေ​ပွေးက​တော့ ​မြွေမုဆိုးလက်​ထဲမှာ ​သေတာပဲ..။
တကယ်​က... အဆိပ်​တည်းဟူ​သော မာန်​မာန​ အမှားကြောင့်​ အဆိပ်​တည်းဟူ​သော အားကိုးရာလက်​နက်​​အမှားကြောင့်​ သူတစ်​ပါးကို အထင်​သေးမိတဲ့အခါ ​မြွေမုဆိုးလက်​မှာ ​သေပွဲဝင်​ရရှာတာပါလား..။
ကျွန်​​တော်​ ဆက်​စပ်​ပြီး ​တွေး​နေမိတယ်​... ကျွန်​​တော်​တို့ လူ့​ဘောင်​ လူ့ပတ်​၀န်းကျင်​မှာလည်း လူ​မြွေ​ပွေး​တွေ အများအပြားပါလား..။ ဟင်း..ငါ့လာမထိနဲ့​နော်​..​သေသွားမယ်​.. ငါ့ကို ဘာ​ကောင်​ထင်​​နေလဲ.. ငါလုပ်​လိုက်​ရ မင်းဘ၀ပျက်​သွားမယ်​ သားကြီး..။ ငါနဲ့ မငြိ​စေနဲ့..ဆိုတဲ့ အစွယ်​တစ်​​ဖွေး​ဖွေး လူ​မြွေ​ပွေး​တွေကို ​တွေ့တိုင်း ​ခြေ​ထောက်​တစ်​ဖက်​ဆာ​နေတဲ့ ​မြွေမုဆိုးကရင်​ဖထီးကြီးကို ကျွန်​​တော်​ ​ပြေးမြင်​ပြီး ပြုံးမိတယ်​..။ ကို​ယ့်​ကိုယ်​ကိုလည်း ပြန်​လည်​ ဆင်​ခြင်​ခဲ့တယ်​..။ စီးပွား​ရေး​လေး အဆင်​​ပြေလာတိုင်း လုပ်​ငန်း​တွေ တိုးတတ်​လာတိုင်း ​​နောက်​ဆုံး..fb မှာ follower ​တွေ တိုးလာတိုင်း ကိုယ့်ကို ချီးကျူးသံ​တွေ ညံလာတိုင်း "ငါကွ" ဆိုတဲ့ မာန်​မာန​တွေ တစ်​ရိပ်​ရိပ်​တတ်​လာ​နေခဲ့ပါလား..။ ကိုယ့်​​ခေါင်း​ပေါ်မှာ ဖထီးရဲ့ ခက်​ရင်း ၂ ခွ မှိန်းကြီး လာဝဲ​နေပြီ​ဆိုတာ မသိဘဲနဲ့ ယစ်​မူးသာယာ​နေတဲ့ မာန်​မာန အဆိပ်​​တွေ..မာန်​မာန အစွယ်​​တွေ.. အိုး.....ရင်​ထဲမှာ အသိဥာဏ်​တစ်​ချို့ လင်းလက်​လို့သွားပါတယ်​.. မာန်​တတ်​မယ်​ကြံတိုင်း ကွမ်း​လေးတဖွီဖွီနဲ့ မှိန်းကြီးကိုင်​ထားတဲ့ဖထီးရဲ့ပုံရိပ်​ကိုမြင်​​ယောင်​မိပြီး ကိုယ့်​ကို​ယ်​ကို ပြန်​ဆုံးမတယ်​..။
မိတ်​​ဆွေတို့​ ခေါင်း​ပေါ်မှာ​ရော.. ဖထီးရဲ့ မှိန်းကြီး​ရောက်​​နေပြီလား...မော့ကြည့်​ကြ​စေချင်​ပါတယ်​..။
ကိုစိုးထိုက်​(ဖဒို) 21.3.2017 စွယ် စုံ
ဘာကွောငျ့ ဒီလိုပွောပါလိမျ့နော့ ပွောပွမယျနော့ ။
ကြှနျ​​တျော​တို့ ဖဒိုမွို့က ​စြေးထဲမှာ ​မွှသေညျ​​တှအေမြားကွီးရှိတယျ​.။ စပါး​ရိတျ​ခြိနျ​ဆိုရငျ​ ​ခေါငျးဖွတျ​ထားတဲ့ ​မွှေ​တှေ အ​ခှလေိုကျ​ထညျ့​ထားတဲ့ လငျ​ဗနျး​ကိုယျစီ​ရှကျ​ပွီး မွှလေိုကျ​​ရောငျး​နတေဲ့ ​မိနျးက​လေး​​တှကေို ဆောငျးဦးနံနကျ​ခငျးတိုငျး တှရေ့တတျ​တယျ​..။ လငျး​မွှေ ​ရေ​မွှေ ​မွှေ​ပှေး အစုံပဲ..​ မွှေ​ပှေးဆိုရငျ​​တော့ ​စြေးကွီးတယျ​.။ တဈ​​ကောငျ​ကို ၁သောငျး ဝနျးကငျြ​​ပေးရတယျ​.. လငျး​မွှတေို့ ​ရေ​မွှတေို့က ပိသာခြိနျ​နဲ့ ​ရောငျးတာ..​စြေးသိပျ​မရဘူး..။ ဒါ​ကွောငျ့​ ​မွှဖေမျးသမား​တှကေ မွှေ​ပှေးလိုကျ​ရှာပွီးဖမျးတတျ​တယျ​..။ တဈ​ညကို ၂ ​ကောငျ​​လောကျ​ပဲရ.. ​နတှေ့ကျ​ ၂သောငျး စီသှားပွီ​လေ..
ကြှနျ​​တျော့​အိမျ​နားမှာ ​မွှလေိုကျ​ဖမျးတဲ့ ​မွှမေုဆိုး ကရငျဖထီးကွီး ​တဈ​​ယောကျ​ရှိ​တယျ​..။ တဈ​​နကေုနျ​ အရကျ​​လေး​သောကျ​လိုကျ​ အိပျ​လိုကျ​နဲ့ ညကမြှ ၂ ခှမှိနျး​လေးကိုငျ​ ၊ ၀ါးပလိုငျး​လေးလှယျ​ ၊ ဓားမ​တိုလေးတဈ​​ခြောငျး ခါးကွားထိုးပွီး ကှမျး​လေးတဈ​ဖှီဖှီနဲ့မွှလေိုကျ​ဖမျး​တော့တာပဲ..။ သူ့​ခွေ​ထောကျ​တဈ​ဖကျ​က နဲနဲဆာတာတာနဲ့ဆို​တော့ လမျး​လြောကျ​ရငျ​ သိပျ​မ​လြောကျ​နိုငျ​ဘူး.. ဒါ​ပမေဲ့ ည ၃ နာရီ​လောကျ​ဆိုရငျ​ အိမျ​​ရှကေ့​နေ ​တောစီးဖိနပျ​သံတဈ​ဂှကျ​ဂှကျ​နဲ့ သူအိမျ​ပွနျ​တဲ့အသံကိုကွားရတယျ​..။ ကရငျ​သီခငျြး​လေးခပျ​တိုးတိုး ဆိုလာပွီဆို ကြိနျးသတေယျ​.. ​မွှေ​ပှေး ၂ ​ကောငျ​​လောကျ​မိလာပွီ.. ​ခွေ​ထောကျ​ဆာတာတာနဲ့ ဒီအတီးက အငျ​မတနျ​လြှငျ​မွနျ​တဲ့ ​မွှဆေိုတဲ့ သတ်တဝါကို ဘယျ​လိုဖမျးလဲဆိုတာကြှနျ​​တျော​စိတျ​ဝငျ​စားတယျ​..။
ဒါ​ကွောငျ့​ တဈ​​နေ့​တော့ ကြှနျ​​တျော​အဲ့ဒီအတီးအိမျ​ကို သှားလညျ​ရငျး သူ့ကို အငျ​တာဗြူးရတာ​ပေါ့.. "အတီး..အတီးက ​ခွေ​ထောကျ​လညျး မသနျ​ဘဲနဲ့ ဒီ​လောကျ​မွနျ​တဲ့ ​မွှေ​တှကေို ဘယျ​လိုဖမျးလဲဗြ.." "ငါက ​ခွေ​ထောကျ​မသနျ​​တော့ လငျး​မွှတေို့ ​ရေ​မွှေ​တို့ကို မဖမျးနိုငျ​ဘူး..။ ဒီ​ကောငျ​​တှကေ လူ​တှရေ့ငျ​ ထှကျ​​ပွေးတယျ​ကှ. ဒါ​ကွောငျ့​ငါ​မွှေ​ပှေးပဲဖမျးတယျ​.." "အတီးက ​မွှေ​ပှေးကို​ရော ဘယျ​လိုဖမျးလဲ.." "​မွှေ​ပှေးက လူ​တှရေ့ငျ​ ထှကျ​မ​ပွေးဘူးကှ.. လူုကိုရနျ​မူမယျ​ဆိုပွီး အသငျ့​အ​နအေထားနဲ့ ငွိမျ​​နတော..။ သူ့မှာ အဆိပျ​ပွငျးတယျ​ပေါ့ကှာ..။ ဘယျ​သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုကျ​ဘူး​​ပေါ့.. လာမထိနဲ့ ​သသှေားမယျ​​ပေါ့ကှာ..။ သူ့ကိုထိတာနဲ့ ဆတျ​ခနဲ လှမျးကိုကျ​​တော့တာပဲ​ဟေ့.. ​သူ့ကိုမထိ​သေးရငျ​ မငျးကိုဘာမှမလုပျ​ဘူး..
အဲ့ဒီ​တော့ သူ့​ခေါငျးနားကို မှိနျးနဲ့အသာ​လေးကပျ​သှားပွီး ထိလုထိခငျ​ကမြှ မှိနျး ၂ ခှနဲ့ ​ခေါငျးကိုအမွနျ​ထိုးခလြိုကျ​ရငျ​ ဒီ​ကောငျ့​ကို မိတာပဲ..ဟဲဟဲ....။ ​မွှထေဲမှာ အဆိပျ​ပွငျးပါတယျ​ဆိုတဲ့ ​မွှေ​ပှေးက ဖမျးလို့အလှယျ​ဆုံးဟ..။ ဒီ​ကောငျ​က အဆျိပျ​ပွငျးတယျ​ဆိုပွီး သူ့ကိုယျ​သူ မာနျ​တတျ​​နတောကိုး..." "​အျော​......" ကြှနျ​​တျော့​ရငျ​ထဲ အ​တှေး​တှေ တသီကွီးနဲ့ အတီးအိမျ​က ပွနျ​လာခဲ့တယျ​..။ အဆိပျ​မရှိ​​တဲ့ ​ရေ​မွှတေို့ လငျး​မွှတေို့ကမှ လှတျ​​မွောကျ​နျို​ငျ​တဲ့လမျး ရှိ​သေးတာပါလား.. ငါအဆိပျ​ပွငျးတာပဲဆိုပွီး မာနျ​တတျ​​နတေဲ့ ​မွှေ​ပှေးက​တော့ ​မွှမေုဆိုးလကျ​ထဲမှာ ​သတောပဲ..။
တကယျ​က... အဆိပျ​တညျးဟူ​သော မာနျ​မာန​ အမှားကွောငျ့​ အဆိပျ​တညျးဟူ​သော အားကိုးရာလကျ​နကျ​​အမှားကွောငျ့​ သူတဈ​ပါးကို အထငျ​သေးမိတဲ့အခါ ​မွှမေုဆိုးလကျ​မှာ ​သပှေဲဝငျ​ရရှာတာပါလား..။
ကြှနျ​​တျော​ ဆကျ​စပျ​ပွီး ​တှေး​နမေိတယျ​... ကြှနျ​​တျော​တို့ လူ့​ဘောငျ​ လူ့ပတျ​ဝနျးကငျြ​မှာလညျး လူ​မွှေ​ပှေး​တှေ အမြားအပွားပါလား..။ ဟငျး..ငါ့လာမထိနဲ့​နျော​..​သသှေားမယျ​.. ငါ့ကို ဘာ​ကောငျ​ထငျ​​နလေဲ.. ငါလုပျ​လိုကျ​ရ မငျးဘဝပကျြ​သှားမယျ​ သားကွီး..။ ငါနဲ့ မငွိ​စနေဲ့..ဆိုတဲ့ အစှယျ​တဈ​​ဖှေး​ဖှေး လူ​မွှေ​ပှေး​တှကေို ​တှတေို့ငျး ​ခွေ​ထောကျ​တဈ​ဖကျ​ဆာ​နတေဲ့ ​မွှမေုဆိုးကရငျ​ဖထီးကွီးကို ကြှနျ​​တျော​ ​ပွေးမွငျ​ပွီး ပွုံးမိတယျ​..။ ကျို​ယျ့​ကိုယျ​ကိုလညျး ပွနျ​လညျ​ ဆငျ​ခွငျ​ခဲ့တယျ​..။ စီးပှား​ရေး​လေး အဆငျ​​ပွလောတိုငျး လုပျ​ငနျး​တှေ တိုးတတျ​လာတိုငျး ​​နောကျ​ဆုံး..fb မှာ follower ​တှေ တိုးလာတိုငျး ကိုယျ့ကို ခြီးကြူးသံ​တှေ ညံလာတိုငျး "ငါကှ" ဆိုတဲ့ မာနျ​မာန​တှေ တဈ​ရိပျ​ရိပျ​တတျ​လာ​နခေဲ့ပါလား..။ ကိုယျ့​​ခေါငျး​ပျေါမှာ ဖထီးရဲ့ ခကျ​ရငျး ၂ ခှ မှိနျးကွီး လာဝဲ​နပွေီ​ဆိုတာ မသိဘဲနဲ့ ယဈ​မူးသာယာ​နတေဲ့ မာနျ​မာန အဆိပျ​​တှေ..မာနျ​မာန အစှယျ​​တှေ.. အိုး.....ရငျ​ထဲမှာ အသိဉာဏျ​တဈ​ခြို့ လငျးလကျ​လို့သှားပါတယျ​.. မာနျ​တတျ​မယျ​ကွံတိုငျး ကှမျး​လေးတဖှီဖှီနဲ့ မှိနျးကွီးကိုငျ​ထားတဲ့ဖထီးရဲ့ပုံရိပျ​ကိုမွငျ​​ယောငျ​မိပွီး ကိုယျ့​ကျို​ယျ​ကို ပွနျ​ဆုံးမတယျ​..။
မိတျ​​ဆှတေို့​ ခေါငျး​ပျေါမှာ​ရော.. ဖထီးရဲ့ မှိနျးကွီး​ရောကျ​​နပွေီလား...မော့ကွညျ့​ကွ​စခေငျြ​ပါတယျ​..။
ကိုစိုးထိုကျ​(ဖဒို) 21.3.2017 စှယျ စုံ